Takelaka - Vaovao momba ny gadget | Vaovao Gadget (Pejy 2)
Xiaomi dia nanangana ny Xiaomi Mi Pad 4 vaovao, ireo no miavaka sy ny vidiny
Xiaomi dia mitohy ho vaovao amin'ny tambajotra noho ny isan'ny fandefasana sy ny vaovao ao amin'ny fivarotana ofisialy izay ...
Ahoana ny fametrahana iOS 12 amin'ny iPhone na iPad anao
Ny beta voalohany an'ny iOS 12 dia efa misy izao mba hahafahan'ny mpandraharaha manomboka mampifanaraka ny fampiharana azy ireo amin'ny kinova iOS vaovao. Atorinay anao ny fomba fametrahana azy amin'ny fitaovanao.
Acer dia manolotra ny takelaka voalohany amin'ny Chrome OS
Acer dia nanolotra ny takelaka voalohany niaraka tamin'ny Chrome OS, takelaka iray izay tian'i Google hotohanana ho mpanjaka ao amin'ny efitrano fianarana amerikana.
Energy Tablet 10 Pro 4, manatsara ny traikefa haverina haino aman-jery multimedia
Energy Tablet 10 Pro 4 dia maodely takelaka mifototra amin'ny Android izay manome valiny tsara ho an'ny fijerena sarimihetsika, andian-tantara na fihainoana mozika
Ny Microsoft Surface Book 2 dia azo vidiana ao Espana ankehitriny
Tonga tany Espana ny ekipa Microsoft farany. Ity ny Microsoft Surface Book 2. Na dia azonao atao aza, amin'izao fotoana izao, amin'ny kinova 13,5-inch
Apple dia manandrana indray amin'ny magazine nomerika
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nandeha niantsena ary nividy ny lisitry ny fisoratana anarana amin'ny magazay Texture, izay manome anay famandrihana amin'ny magazine 200 mihoatra ny $ 9,99.
Android P no faran'ny tandavan Nexus
Ny andiany manaraka an'ny Android, Android P, dia tsy hifanaraka amin'ireo maodely farany amin'ny faritra Nexus na amin'ny takelaka Pixel C an'ny Google.
Microsoft Surface Pro LTE dia misy azo amandrihana (tsy any Espana)
Microsoft dia mandefa ny Microsoft Surface Pro LTE, kinova mifantoka amin'ireo mpampiasa izay mihetsika hatrany ary mila mifandray hatrany.
Huawei MediaPad M5 sy M5 Pro, takelaka roa matanjaka ho an'izay tianao
Huawei MediaPad M5 no takelaka takelaka vaovao natolotry ny orinasa Aziatika amin'ny rafitry ny MWC 2018. Na eo ambanin'ny Android na mifantoka amin'ny mpihaino rehetra
Alcatel 1T, takelaka roa vaovao misy Android 8.0 Oreo ary ny vidiny ambanin'ny 100 euro
Alcatel dia nanolotra ny takelaka vaovao ho an'ny MWC 2018: io no andiany Alcatel 1T misy maodely roa: Alcatel 1T 7 sy Alcatel 1T 10
ChromeOS dia mety nahatratra ny endrika takelaka
Nandritra ny foara BETT tany London dia azo atao ny mahita ekipa Acer zavatra tsy dia mahazatra: takelaka misy ChromeOS napetraka
Ahoana ny fisafidianana takelaka ho an'ny ankizy
Rehefa mividy takelaka ho an'ny ankizy dia tsy maintsy mihevitra olana isan-karazany isika, ary tsy mamela ny tenantsika hotarihin'ireo vokatra izay amin'ny teôria noheverina sy natao ho azy ireo. Atorinay anao ny fomba tokony hisafidiananao tsara takelaka ho an'ny ankizy.
Ny mpanampy Google, Google Assistant, dia efa mifanaraka amin'ny terminal misy Android Lollipop
Ary farany, Google dia nahatsapa fa ny anjaran'ny tsenan'ny Lollipop dia tena zava-dehibe tokoa hamela azy hitsoaka avy amin'ny Google Assistant
Clear ID, mpamaky rantsan-tànana sarotra izay tafiditra ao ambanin'ny efijery amin'ny findainao
Ny Synaptics dia manaitra anay amin'ny fampisehoana ny Clear ID, sensor iray an'ny dian-tànana optika natao manokana hapetraka ao ambanin'ny efijery
Ireo no fitaovana Samsung rehetra izay havaozina amin'ny Android Oreo, izay miavaka ny Galaxy S6
Ity misy lisitr'ireo terminal rehetra izay havaozina amin'ny Android Oreo mandritra ny taona manaraka, toy ny S6 sy ny Note 5
Lenovo Moto Tab, Motorola dia miverina amin'ny takelaka Android
Lenovo dia handefa takelaka Android-based fotsiny ho an'ny mpanjifan'ny AT&T mpandraharaha. Ity no Lenovo Moto Tab vaovao
Microsoft dia manolotra ny Microsoft Surface Pro LTE Advanced
Microsoft mandefa ny Microsoft Surface Pro LTE Advanced. Modely iray te-ho benchmark amin'ny teknolojia finday miaraka amin'ny fifandraisana LTE Cat 9
Ny takelaka tsara indrindra amin'ny 2017
Te hahafantatra ve ianao hoe iza amin'ireo takelaka tsara indrindra amin'ny 2017? Aza adino ireo maodely ireo izay nahomby tamin'ny sandam-bolany ary izy ireo no mpivarotra tsara indrindra.
Samsung Galaxy Tab Active 2, endri-javatra feno ary sary naseho talohan'ny fanambarana
Samsung Galaxy Tab Active 2 dia maodely takelaka misy chassis mikitoantoana — miaraka amin'ny fiarovana bebe kokoa— izay hita vao tsy ela akory izay
Ny NVIDIA dia tsy hanavao ny Shield Tablets ho an'ny Android 8.0
NVIDIA dia nanamafy fa tsy hanavao ny takelaka roa eo an-tsena amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasa Android, fantatra ihany koa amin'ny hoe Oreo.
Twitter Lite ho an'ny Android dia zava-misy ankehitriny
Ny fampiharana Twitter Lite dia efa zava-misy ary ny firenena voalohany ahafahana misintona azy dia i Filipina
Lenovo dia mandefa ny Tab 4 miaraka amin'ny vaovao amin'ny sehatry ny fitaovana
Izahay dia manolotra ny Lenovo Tab 4, takelaka vaovao an'ny marika sinoa izay mikendry ny hamelombelona indray ny tsena kely amin'ny fitotonganana.
Apple dia nampiakatra ny vidin'ny iPad Pro noho ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan'i NAND
Apple dia nanavao ny vidiny ambony ho an'ny maodely iPad Pro rehetra noho ny olana momba ny fahatsiarovana ny NAND.
Miverina any an-tsekoly Inona ny takelaka azo vidiana manampy ahy hianatra?
Inona ny takelaka azo vidiana hanampiana ahy sy ny zanako hianatra? Aza adino ny torohevitray hiverina any an-tsekoly ao amin'ny Actualidad Gadget.
ASUS ZenPad 10, takelaka misy traikefa multimedia farany
Tsy ny solosaina finday vaovao ihany no nasehon'ny ASUS tao amin'ny IFA any Berlin, fa koa te hampiseho izay ...
Mangatsiaka ao amin'ny Apple Store ao Sol ny fitaovana
Apple dia mandre ny toro-hevitrao amin'ny fampiasana fitaovana amin'ny toe-javatra mafana. Ary hita taratra izany amin'ny magazay ara-batana sasany
LG dia manolotra ny LG G Pad IV 8.0 vaovao miaraka amina endrika ultralight ary vidiny manaitra
LG androany dia nanolotra ny LG G Pad IV 8.0 vaovao izay misongadina amin'ny famolavolana azy tsara, endrika mahaliana ary vidiny mirary.
Io ilay Microsoft Surface Mini izay tsy nahatratra ny tsena
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Windows Central dia namoaka ny sarin'ny zavatra tsy tonga teny amin'ny tsena, Microsoft Surface Mini miaraka amin'i Windows RT
Ahoana ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny rindrina Android
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hamahana ny olana amin'ny overlay dia hita amin'ny Android-nao ary tsy mamela anao hampiasa ny terminal-nao izany.
Chuwi Surbook, ilay clone Surface izay manafotra an'i IndieGoGo
Ity ny Chuwi Surbook, fitaovana miasa amin'ny Windows 10, manana fitaovana matanjaka sy vita amin'ny vidin'ny fandravana.
Apple hamoaka iPad Pro vaovao amin'ny 5 Jona ao amin'ny WWDC
Ny tsaho momba ny fanolorana iPad Pro vaovao amin'ny 5 jona amin'ny teny fanokafana ny ...
Ny fizarana ny efijery smartphone amin'ny solosaina dia tsotra be noho ireo rindranasa asehonay anao anio amin'ity lahatsoratra ity.
Xiaomi Mi Pad 3, ilay takelaka Xiaomi vaovao izay manondro avo dia avo
Ny Xiaomi Mi Pad dia efa ofisialy ary voalohany amin'ny tsena mirehareha amin'ny endri-javatra sy ny famaritana, indrindra fa ny vidiny.
Manomboka mandà ny fampiharana izay avoaka maimaimpoana ny App Store
Ny fitsipiky ny Apple App Store vaovao dia mitaky ireo mpampiasa hanala ireo teny maimaim-poana na maimaim-poana amin'ny anaran'ny fampiharana, sary masina ary pikantsary.
Apple dia namoaka ny iOS 10.3, ny fanavaozana farany indrindra ho an'ny iPhone sy iPad
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia namoaka ny fanavaozana ny iOS farany, isa 10.3 izay mitondra antsika fiasa vaovao marobe.
Ho fanampin'ny iPhone dia havaozina ihany koa ny iPad
Amin'ity tranga ity, ireo avy amin'ny Cupertino dia tsy nanao fehezan-teny hamoahana ny fitaovany ary toa tsy ...
Apple hanala apps 200.000 amin'ny famoahana ny iOS 11
Leo ny miandry i Apple ary amin'ny fanombohana ny iOS 11 dia hesoriny amin'ny App Store ireo rindranasa rehetra izay tsy novaina
Pikantsary iray tafaporitsaka no nanamarina ny fanombohan'ny Apple ny iPad Pro 10.5-inch vaovao.
Nanambara i Microsoft fa hijanona tsy hiasa ny Skype Wifi amin'ny 31 martsa
Ireo tovolahy avy any Redmond dia nanambara fa hijanona tsy hiasa ny Skype Wifi amin'ny 31 Janoary.
Ny Samsung Galaxy Book dia efa ofisialy ary tsy hamela anao tsy hiraharaha izany amin'ny lafiny rehetra
Samsung dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Book, fitaovana mahaliana izay manana fitoviana lehibe amin'ny fitaovana Surface.
Samsung Galaxy Tab S3, filokana vaovao an'ny Samsung hiadiana amin'ny iPad
Nandritra ny andro maro dia fantatray fa hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Tab S3 androany i Samsung ho ampahany amin'ny ...
iOS 10 dia efa eo amin'ny 79% amin'ireo fitaovana tohanan'ny
Ny kinova faha-79 an'ny rafitra fiasan'i Apple ho an'ny finday dia efa eo amin'ny XNUMX% amin'ireo fitaovana tohanan'ny.
Fivoahan'ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa Galaxy Tab S3
Asehonay aminao ny boky momba ny takelaka vaovao an'ny takelaka Samsung, ny Galaxy Tab S3, izay hahitana S Pen iray raha ny tsaho.
Fanadihadiana Cube iwork1x: takelaka PC ho an'ny 180 € fotsiny
Mitohy amin'ny fijerinay ireo vokatra teknolojia, amin'ity indray mitoraka ity dia entinay anao ny famakafakana ny Cube iwork1x, PC tablet ...
Ny 12 ″ iPad Pro miaraka amina fandefasana entana. IPad Pro vaovao eo imasony?
Rehefa manomboka amin'ny varotra vokatra Apple vaovao ianao dia ara-dalàna raha iharan'ny tsy fahampian'ny tahiry, ...
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny takelaka Samsung manaraka, dia milaza fa hifanaraka amin'ny S Pen an'ny orinasa izany.
Hanampy S-Pen ve ny Samsung Galaxy Tab S3?
Toa nanomboka nipoitra ny tsaho momba ny fanolorana ilay takelaka Samsung vaovao taorian'ny fanambarana ny ...
Samsung dia nanambara ny datin'ny hetsika hataony ao amin'ny MWC izay hanolorany Galaxy Tab vaovao raha tsy misy ny Galaxy S8 nandrasana hatry ny ela.
Ireo tovolahy ao amin'ny Microsoft dia nanambara fotsiny fa nodimandry ny Surface 3 ary tsy amidy intsony amin'ny firenena maro.
Androany 7 taona taorian'ny nanombohan'ny iPad
Androany, 27 Janoary, manamarika ny fahafito taonan'ny nanombohana ny maodely iPad voalohany.
iOS 10.3 dia hitondra antsika rafi-drakitra vaovao, haingana sy azo antoka kokoa antsoina hoe APFS
Ny rafitra fisie Apple vaovao antsoina hoe APFS (Apple File System) dia hanome antsika filaminana sy hafainganam-pandeha bebe kokoa amin'ny fitaovantsika.
Ny Samsung Galaxy Tab S3 vaovao dia mandalo ny fitsapana GFXBench
Samsung dia tsy manipy servieta velively ary amin'ity indray mitoraka ity na eo aza ny tsenan'ny takelaka dia ...
Nokia dia manohy ny fahaterahany indray ary ny fitaovana manaraka izay havoakany ao amin'ny MWC dia takelaka 18.4-inch.
GFXBench dia mampiseho ny valin'ny takelaka Nokia 18,4 new izay mety
Nokia dia kasaina ho tonga ao amin'ny Mobile World Congress amin'ny volana febambra ho avy izao miaraka amin'ny zavatra rehetra eo ambony latabatra ary ...
Ireo iPads vaovao dia tsy havoaka hatramin'ny tapany faharoa amin'ny 2017
Ity dia iray amin'ireo vaovao tsy maintsy raisintsika miaraka amin'ny voamadinika satria tsy ofisialy mihitsy izany, ...
iOS 10 dia hita amin'ny 76% amin'ireo fitaovana tohanan'ny
Ny kinova faha-3 an'ny iOS dia efa misy amin'ny fitaovana mifanaraka amin'ny 4 amin'ny XNUMX miaraka amin'ity kinova ity.
Super Mario Run dia nakarina 37 tapitrisa ary nampiditra vola 14 tapitrisa tao anatin'ny 3 andro fotsiny.
Nandritra ny telo andro voalohany famotsorana ny Super Mario Run, ity lalao ity dia nakarina 37 tapitrisa in-14 niteraka fidiram-bola XNUMX tapitrisa
LG dia manolotra ny takelaka LG G Pad III 10.1 amin'ny $ 360 amin'ny kinova LTE
LG dia manana takelaka vaovao ao amin'ny repertoire-ny: LG Pad III 10.1. Iray amin'ireo mampiavaka azy ny manana maody 4 toerana
Ny fampiharana, lalao, sarimihetsika ary mozika tsara indrindra amin'ny 2016 araka ny Apple
Vao namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny lisitry ny fampiharana, lalao, sarimihetsika, mozika ary boky 2016 tsara indrindra i Apple.
Ireo no azo atao manokana mamaritra ny Surface Pro 5
Ny Surface Pro 5 dia haseho amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela ary amin'izao fotoana izao dia efa afaka nahafantatra ny mombamomba azy isika noho ny fivoahana.
Ny lalao tsara indrindra amin'ny 2016 ho an'ny Android, araka ny Google
Ireo bandy ao amin'ny Google dia tsy namorona filaharana miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra, fa namorona filaharana miaraka amin'ireo lalao tsara indrindra tamin'ny 2016 ihany koa
Nohavaozina ny YouTube Kids ary mamela ny fanakanana horonan-tsary sy fantsona izao
Ny rindranasa YouTube ho an'ny ankizy kely ao an-trano dia nahazo fanavaozana izay mamela ny fanakanana ireo horonantsary sy ireo fantsona iray manontolo.
Ho tonga any Etazonia ny Huawei MediaPad M3 ary efa any Eropa
Nandritra ny IFA 2016 lasa teo, faly i Huawei nanolotra gadget vaovao marobe izay hitondra ny fiainantsika ...
Apple dia manomboka mamafa ny rindranasa ao amin'ny App Store
Apple dia nanomboka nanjary matotra amin'ny fanadiovana izay nambarany volana vitsivitsy lasa izay tao amin'ny App Store, nanala ireo fampiharana sy lalao izay tsy novaina efa ela.
Omaly ny iPhone 6s ary androany dia ny iPad Pro 9,7 ″ izay hita ao amin'ny lisitra nohavaozina
Apple dia manohy manampy vokatra amin'ny lisitra lava amin'ireo fitaovana namboarina efa amidy ary raha hitantsika omaly ny ...
Ny Chuwi Hi10 Plus dia manova ny processeur hanome antsika hery sy fahombiazana bebe kokoa
Ny Chuwi Hi10 Plus izay nodinihintsika andro vitsivitsy lasa izay dia nanova ny mpikirakira azy, hanomezana antsika hery sy zava-bita bebe kokoa.
Ny Nokia D1C andrasana dia mety ho takelaka fa tsy finday avo lenta
Araka ny voalazan'i Geekbench, ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny smartphone Nokia D1C andrasana dia tsy ho finday finday fa takelaka
Holazainay aminao kely momba ity ASUS Transofrom Mini mora vidy ity sy fitaovana tsara izay hahasarika ny masonao.
Tsaho momba ny iPad Pro vaovao amin'ny lohataona 2017
Ny tsaho momba ny vokatra Apple dia tsy mijanona ary na dia manakaiky ny fandefasana ...
Google Maps dia manova ny fomba anehoany amintsika ny toerana misy antsika amin'ny Android
Google maps for Android dia nanova ny fomba isehoan'ny toerana misy antsika amin'ny Android, manomboka amin'ny zana-tsipika kely mankany amin'ny fanilo.
iOS 10 dia efa eo amin'ny 34% amin'ireo fitaovana tohanan'ny
Ny tahan'ny fananganana ny iOS 10 dia mitombo hatrany amin'ny taha ambony, zavatra efa nahazatra antsika, tsy toy ny mitranga amin'ny Android.
24 ora aorian'ny famoahana ny iOS 10 dia efa eo amin'ny 14,5% amin'ireo fitaovana tohanan'ny rehetra izy io
Ny isan'ny iOS 10 24 ora aorian'ny nanombohany dia mampiseho amintsika ny fomba nanombohan'ny 14,5% ny fitaovana mifanaraka aminy.
Ireo no ora hisintomana ny iOS 10 arakaraka ny toerana onenanao
Androany no andro nofidian'i Apple hanombohana, aorian'ny volana maro an'ny betas, na ho an'ny daholobe na ho an'ny mpamorona, ny ...
12,9 urb iPad Pro izay namboarina dia hita ao amin'ny tranonkalan'i Apple
Androany maraina rehefa niditra tao amin'ny tranonkalan'ny Apple hahitana ny vaovaon'ny fitaovana natolotra ...
Samsung dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Galaxy Tab A 2016 any Korea Atsimo miaraka amin'ny vaovao lehibe milaza fa misy S-Pen izay tena ilaina tokoa.
Ny Amazon Fire HD 8 dia havaozina miaraka amin'ny bateria tsara kokoa sy fanohanana an'i Alexa
Lazainay aminao ny hevitry ny vaovao momba ny Amazon Fire HD 8, ilay takelaka vaovao 8-inch avy any Amazon amidy amin'ny 21 septambra.
Endri-javatra ao amin'ny Huawei MediaPad M3
Ny olona dia tsy miaina amin'ny finday finday fotsiny, na dia efa elaela aza ary noho ny habeny ...
7 amin'ireo lalao takelaka tsara indrindra hankafizana indrindra
Androany izahay dia mampiseho aminao ny lalao 7 tsara indrindra ho an'ny takelaka, izay azonao atao ny mankafy sy miala voly mandritra ny fotoana maharitra.
Misy takelaka Amazon vaovao hita ao amin'ny FCC
Ao amin'ny FCC dia efa misy ny tatitra momba ny takelaka Amazon vaovao, fitaovana iray afaka manolo ny Amazon Fire HD 8 izay tsy zaraina intsony ...
Samsung dia hitondra ny S Pen ao amin'ireo takelaka Samsung vaovao
Ny torolàlana an-tranonkala amin'ny SM-P580 dia manondro fa ny takelaka Samsung vaovao dia hanana ny S Pen an'ny Galaxy Note 7, stylus iray mahaliana amin'ny takelaka 10,1-inch
Ny iPad mini 4 dia misy ao amin'ny faritra nohavaozina an'ny Apple
Iray amin'ireo vaovao tianay hizara amin'ireo mpampiasa rehetra te-hitahiry vola amin'ny ...
Chuwi Vi10 Plus ho solon'ny Surface 3
Amin'ity tranga ity, ny Chuwi Vi10 Plus dia safidy mazava amin'ny Microsoft Surface 3 noho ny fizarana tsara eo amin'ny haavon'ny fitaovana sy ny endriny mahafinaritra.
Ity ve ny iPad Pro 2 vaovao?
Tonga amin'ny faran'ny volana Jolay ity isika ary tsy mijanona ny tsaho momba ny fitaovana Apple ...
Ny Samsung Galaxy Tab S3 dia mety ho akaiky kokoa noho ny eritreretintsika
Nijanona kely ny orinasa Koreana Tatsimo sy ny orinasa rehetra miandraikitra ny fandefasana modely vaovao amin'ny takelaka ...
Ny ASUS ZenPad 3S 10 dia manangona fitaovana mahavariana
ASUS dia manolotra ny ZenPad 3s 10, takelaka matanjaka be izay afaka mahasarika mpampiasa maro raha toa ka mijanona mifanaraka hatrany ny vidiny.
Tonga any Espana amin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy Tab A
Androany i Samsung dia nanolotra teto amin'ny firenentsika ny Galaxy Tab A 2016 vaovao ary fantatsika lalina amin'ity lahatsoratra mahaliana ity.
Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition, takelaka mahaliana misy Windows 10
Notsapainay ny Energy Tablet 8 ”Windows Lego Edition ary dinihinay amin'ity lahatsoratra ity izany, rehefa avy namela tsiro tena tsara teo am-bavantsika.
Takelaka tonga lafatra 5 homena ny zaza amin'ity Noely ity
Lahatsoratra izay asehonay aminao ny takelaka 5 tonga lafatra ho an'ny ankizy azonao omena azy ireo amin'ity Noely ity.
Fomba fito hanafoanana ny toerana fitehirizana amin'ny Android
Tsy manana toerana fitehirizana amin'ny fitaovana Android anao ve ianao? Raha eny ny valiny dia araho ireto torohevitra ireto mba hanafoanana ny toerana fitahirizana.
Notsapainay ny Surface 3, fitaovana miavaka miaraka amin'ny sonian'ny Microsoft
Ny Surface 3 no fitaovana farany an'i Microsoft ary nanana ny fotoana hitsapana azy izahay, ary namintina fehin-kevitra mahaliana.
Ireo no takelaka tsara indrindra eny an-tsena
Te hividy takelaka ve ianao? Raha eny ny valiny dia zahao ity lisitra ity izay ampisehoanay anao ny tsara indrindra.
Lisitry ny vahaolana hamahana ireo olana momba ny fahatsapana iPad mini
Famerenana fitaratra fitaratra fiarovana: PanzerGlass
Ity ny fanadihadihana iray vera ho an'ireo fitaovantsika antsoina hoe PanzerGlass izay manome antsika fiarovana ho an'ny pikantsarantsika amin'ny fianjerana sy ny gorodona